September 2021 – Page2– Shwe Yaung Lan
တရုတ်တွေစျေးရောင်းရင် အောင်မြင်တဲ့အဓိက လျှို့ဝှက်ချက် ၁၇ ချက်
September 15, 2021 SYL 0
၁ ။ ဆိုင်နေရာကောင်းခြင်းဟာ ဆိုင်ကြီးတာ ငယ်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ၂ ။ ရောင်းကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဆိုင်နေရာထက် ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပြန်တယ် ။ ၃ ။ စကားချိုချိုသာသာ စျေးရောင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောက်သည်ကို ပိုမြဲစေပါတယ် ။ ၄ ။ အရင်းအနှီး နည်းတာကို စိုးရိမ်ခြင်းထက်၊ ယုံကြည်မှု နည်းတာကို ပိုစိုးရိမ်သင့်ပါတယ် ။ ၅ ။ ဆိုင်ကို လှလှပပ […]
သေမယ့်ရက်ကိုတောင် ရွှေ့ပစ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ၆ မျိုး
သေမည့်နေ့ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်သောကုသိုလ်များ… မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည် ။ မိမိကိုယ်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ အသက် (၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကို ကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။ ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ အသက် (၆၀) နေမွန်းတည့်ချိန်တွင် သေမည်။ သေလျှင် မြောက်ဘက် တောတန်းတွင် မျောက်ဖြစ်လိမ့်မည် ” ဟု […]
မြတ် စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့ လောကမှာ စီးပွားရေးပျက်ရာ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုပေါက်ကြီး ၆ခုဆိုတာ ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်မြဲဘူးတဲ့…မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်“ လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုဟောသလဲဆိုရင် နံပါတ်(၁)က အာလသျလူပျင်းနဲ့ဆိုရင် ငွေဟာ အတူမနေဘူးတဲ့။ ပျင်းရိလို့ရှိရင် ပျင်းတယ်ဆိုတာ ပူလွန်းတယ်၊အေးလွန်းတယ်၊ မိုးချုပ်လွန်းတယ်၊ ဆာနေသေးတယ်၊မစားရသေးဘူး၊ စားပြီးပြီ၊ ဗိုက်လေးတယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေကို အကြောင်းပြပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတာကို ပျင်းတယ်လို့ပြောတာနော်။ အဲဒီလိုပျင်းရိမှုဟာလည်း ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ယိုကျဖို့ရာ အပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့။ […]
ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေဟာ ခေတ်မီနည်းပညာသုံးကားတွေဖြစ်ပြီး ဟိုးအရင် ခေတ်ဟောင်းကားတွေနဲ့မတူ မော်တော်ယာဉ်အတွက်ရော၊ ကားမောင်းသူအတွက်ပါ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နည်းပညာတွေကို တီထွင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ဒီနေ့တင်ပြပေးချင်တဲ့ ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock သုံးမျိုးကတော့ ကားမောင်းသူ တစ်ယောက်တည်း အတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ကားမှာလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်တဲ့ ကားမောင်းသူရဲ့ မိသားစုဝင် (အဓိက အားဖြင့် ကလေးတွေ) တွေအတွက် အထူးပြုလုပ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Safety Lock လေး ၃ မျိုးပါ။ ၁။ Child Lock […]
ဆံပင်ပါးပြီး ဆံပင်ခဏခဏ ကျွတ်တတ်သူတွေအတွက်…. ဆံပင်ပါးပြီး ဆံပင်ခဏခဏ ကျွတ်တတ်သူတွေအတွက် ကြက်သွန်နီနဲ့ ထိန်းသိမ်းနည်း Shampoo ထဲ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တွေက ကိုယ့် ဆံပင်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆံပင်ကျွတ်လွယ်စေပါတယ်။ ဆံပင် ကျွတ်တာက တော်တော် စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အရာပါ။ ဆံပင် ပါးလွန်းတာကလည်း ကျန်းမာတဲ့ ဆံသား ပုံစံ မရဖို့ တံတိုင်းကြီး တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဆံပင်ပါးပြီး ခဏခဏ ဆံပင်ကျွတ်တတ်သူတွေ […]
ကမ္ဘာမြေဆွဲအားကို ပျက်ရယ်ပြုနေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား နေအိမ် ၂၄ အိမ်
စာဖတ်သူပရိသတ်များအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။အိမ်ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ နားခိုရာနေရာပါ။ဘယ်နေရာသွားသွား ဘယ်မြို့ကိုပဲရောက်ရောက် ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်အိမ်သာလျှင် အနွေးထွေးဆုံးပါ။ဒါပေမယ့် လူတိုင်းအိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။အမှန်တိုင်း ပြောရရင် အိမိပိုင်တဲ့သူဆိုတာ အတော်အသင့်နေနိုင်တဲ့လူပါ။ဒီနေ့မှာတော့ သာမန်မဟုတ်ပဲ အိမ်ဒီဇိုင်းအထူးအဆန်းကြီးဖြစ်တဲ့ ဇောက်ထိုးအိမ်ဒီဇိုင်း အစုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ဒီဇိုင်းက နည်းနည်း ရီစရာလိုဖြစ်မေပေမယ့် တကယ်တမ်းက ဆောက်ရပိုခက်ပါတယ်။ပညာတေံအများကြီး လိုလို့ပါ။ကိုယ်အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ ဒီ ဒီဇိုင်းတွေ ယူသုံးလို့ရတယ်နော်.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) […]
တဖြည်းဖြည်း အိုမင်းလာစေတဲ့ အလေ့အကျင့် ၁၀ မျိုး
သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေနိုင်တဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး…. သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ရုပ်ရင့်တာအပြင် သင်နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထ တချို့ကြောင့်လည်း မြန်မြန်ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင်ဗျာ (၁) အဆီမပါသည့် အစာ စားခြင်း…. အဆီမပါတဲ့ အစာတွေကိုပဲ စားနေရင် အသားအရေက အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းပြီး အရေးကြောင်း ထင်စေနိုင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ […]
အရမ်းကြိုက်လို့ ကြီးပွားကြောင်း ( ၇ ) ရပ် (မဖတ်ဘဲနေရင် နောင်တရလိမ့်မယ်) ၁။ ကိုယ့်ဆီ ဝင်လာတဲ့ငွေရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကို အမြဲတမ်းချန်ထားပါ။ ၂။ ကိုယ့်ဆီဝင်လာသော ငွေများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲပါ။ ငွေဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို သိထားဖို့လိုသလို ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို ဂဃနဏ သိထားဖို့လည်း လိုတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ထွက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေရှိရင် အမြန်ဆုံး ပိတ်ပစ်ရန် လိုသည်။ အဲဒီလို မလုပ်ရင် အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို […]
September 14, 2021 SYL 0
ခွေးလေးတွေဆိုတာ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းကြတဲ့အလျောက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် အမွေးများဆုံး တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခွေးတွေအကုန်လုံးက အရမ်းသိမ်မွေ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အန္တရာယ်အများတတ်ဆုံး ခွေးမျိုး (၁၀) ခုကို ဖော်ပြေပေးလိုက်ပါတယ်… (1)American Pit Bull Terrier Pitbull တွေက များသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ ပုံပန်းရသဏ္ဍာန်ကိုက ကြောက်စရာကောင်းတတ်ပါတယ်။အရမ်းလည်း နူးညံ့တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခန့်မသင့်တဲ့ ချိန်ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိတဲ့ ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် ရင်ဆိုင်တာထက် ပြေးတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ (2)Rottweilers သူတို့ကတော့ […]
တုပ်ကွေးကို အပြုတ်တိုက်မည့်ကြက်သွန်ဖြူ ခေတ်အဆက်ဆက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော သုတေသနစမ်းသပ်ချက်များအရ ကြက်သွန်ဖြူသည် ရောဂါပိုး အမျိုးမျိုးကို သေစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ်ကြက်သွန်ဖြူသည် အအေးမိ၊ နှားစေးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာ၍ ဖျားခြင်း၊ ပသိရောင်ခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိခြင်းကို အမြန် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ရေနွေးပူပူအတွင်းသို့ ကြက်သွန်ဖြူဥ သုံးဥခန့်ကို ချင်း(ဂျင်း)၊ အာလူး၊ မုန်လာဥ၊ ငရုတ်ကောင်းတို့နှင့်အတူ စွပ်ပြုတ်လုပ်၍၊ ပူပူလေး သောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် လည်ချောင်းနာ၍ ဖျားခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိခြင်းတို့ကို အမြန်သက်သာစေပါသည်။ ဒေါက်တာအောင်နိုင်(ဆေးသုတေသန) မြန်မာမှု […]